भर्खरै मात्रै एक पार्टीमा एकजना मित्रसँग भेट भयो। ‘घटिया’ भन्ने विषयमा चर्चा चलिरहेको थियो। मित्रले साथीहरुकाबिचमा भनेँ ‘जब मैले शाहिद कपुरका फोटो देख्छु तब मलाई उसप्रति दया लाग्दछ र जब म करिना कपुरको फोटो देख्छु उनिप्रति रिस उठ्छ। किन उनले शाहिदलाई धोका दिइन? कति हेण्डसम र चकलेटी अनुहारको छ यो शाहिद कपुर। आखिर सेफ अली खानमा के त्यस्तो चिज होला र उसले शाहिदलाई छोडेर शेफ अलितिर लागि ? अनि अहिले बच्चा पनि पाई? खासमा यदि सेफले करिनालाई पनि छोडिदिएको भए उनले सोच्दि हुन् प्रेमीलाई धोका दिनु कत्तिको घातक हुन्छ भन्ने कुरा?
उनीहरुको कुरा सुनेर म हल्का मुस्कुराएँ मात्र। सोच्नुहोस किन ? उसले के गलत गरी? शेफ अवश्यपनि शाहिद कपुरभन्दा उनको लागि योग्य होला ! यसकारण करिनाले शेफलाई आफ्नो बनाई। यदि शेफभन्दा पनि योग्य उनका लागि कोही मिलेको खण्डमा सायद उनले शेफलाई छोडेर अर्कोलाई पनि अपनाउने थिइन क्यारे। तर यो कुरा शेफका लागि पनि लागु हुन्छ उसले पनि करिनाभन्दा योग्य यदि कोही भेटेको खण्डमा करिनालाई छोडेर अरु कसैको जीवनमा समाहित हुन सक्थे। मेरा कुरा सुनेर साथी रनभुँल्लमा परे।
र उनले भने ‘के मतलब हो तपाईको? के जीवनभर प्रेमी बदल्नु राम्रो हो ? फेरि यसरी बदल्नुमा कसरी साँचो प्रेम झल्किन्छ ? यो त केवल वासना हो’।
मैले भने– होइन, यही नै साँचो प्रेम हो। कुनैदिन एउटा छोडेर अर्कोसँग जीवन गुजारेका कुनै युवती वा महिलासँग सोधिएको खण्डमा उनले बताउँनेछिन जो सँग प्रेम थियो त्यो पनि साँचो थियो, जो सँग प्रेम गरिरहको छु त्यो पनि साँचो हो र जो सँग गर्नेछु साँचैप्रेम गर्नेछु। यस्तो जवाफ आउनेछ। किनकी यदि करिनालाई यो कुरा सोधियो भने उनले भन्नेछिन शाहिदसँग पनि उनको प्रेम साँचो थियो र आज शेफ अलिखानसँग पनि उनको प्रेम साँचो नै छ।
सायद उनीहरुले मेरा कुरा बुझेनन् वा मेरो विचारसँग सहमत भएनन् आखिर हाम्रो कुराकानी बन्द भयो त्यहाँ। धेरैलाई यो लाग्दो पनि होला कि सहमत नहुन पनि सक्लान किनकी एकपछि अर्को प्रेमगर्नेलाई हामी सही पनि भन्न सक्दैनौ बिना बाचा गरिएको प्रेम पनि के प्रेम ? भन्ने प्रश्न उठ्छ।
मेरो मान्यता के भने बिना बाचाका साथ गरिएको प्रेम जुनसुकै होस खासगरी रोमाण्टिक प्रेम सबैभन्दा आनन्ददायक हो। जस्तै हाँगामा फक्रेको फूलको कुनै बाचा हुन्न कि ऊ सधैं हाँगामा फूलीरहोस् वा सधैं सुगन्ध दिइरहोस् यसरी नै प्रेम पनि कुनैपनि शर्तमा बाँधिएर रहन्न ताकि सधैंभरी प्रेम भइनै रहोस् भन्ने। तर दुवैको स्थिति उस्तैउस्तै हो चमत्कार स्वप्निल। यसको तुलनामा हामी प्लाष्टिकको फूलसँग गरेर हे¥यौं भने धेरै भिन्नता पाउँछौं। जो पलपल फुलीरहेको त हुन्छ तर डालीमा फूलेको फूलले जस्तै आनन्द, सुगन्ध र कहाँ दिन्छ र ?
तर यो नशा धेरैपटक बाहिर निक्लन्छ। कहिले सातदिनमा त कहिले सात महिना र कहिलेकाँही सात वर्षमा। नशा वाहिर निक्लनुमा केवल तीन कारण हुन सक्छन्। पहिलो जुन मान्छे एकदम राम्रो थियो तर पछि गएर उसका कमि कमजोरीहरु आउन थाले जुन रुचिकर भएनन् भने दोश्रो के भने जुन प्रेम बिना बाचाकासाथ सुरुभएको थियो भने पछि बाचाको दबाब हुँदै शर्तहरु थोपार्न थालियो। जस्तै यस्तो नगर, उस्तो नगर, यस्तो नलगाऊ आदि। तेश्रो के भने विभिन्न कारणहरु जस्तै घर र समाजको दवाव, सुखी र समृद्दि जीवनको चाहना अति महात्वकाँक्ष आदि हुन्छन्।
तर कारण जे सुकै होस तर लेखको उदेश्य के भने बिना बाचाकासाथ शुरु भएको प्रेमको यात्रामा उसलाई जुनसुकै साथीको साथ जुनसुकै स्टेशनमा उत्रनु उसको हक हो। जो प्रेमिका यस जन्मको लागि नभई अर्को जन्ममा तपाईलाई पाउनका लागि भगवानसँग प्रार्थना गरिसकेकी छ र एकदिन उसले भनि की मेरो जीवनमा तपाईलाई यो जन्ममा कुनै स्थान छैन त्यसबेला केवल भन्नुपर्दछ ‘नो प्रब्लम’। अतितका जतिपनि क्षणहरु उससँग विताएका हुन्छन् जुन स्वर्णिम हुन्। जसरी मानिस मरेर जान्छ र जिउँदो बनाउन सकिँदैन त्यसरी नै प्रेम विछोड भइसकेपछि फेरि प्रेमको आशा गर्नु मरिसकेकोलाई जिउँदो बनाउनु जस्तै हो। प्रेमी पाएपनि प्रेमत्व पाइदैन।
त्यसैले अर्को एउटा बाटो छ कुनै प्रेमको फूल फूल्ने वा फुलाउने आशा गर्नु। तर हमेसा याद राख्ने कुरा के भने यी प्रेमका फूलहरु कुनैपनि बेला मुर्झाउन सक्छन्। यदि फूल मुर्झाउँछ र त्यो बेचैनबाट बच्ने उपाय केवल एउटै बाटो हो ‘बिबाह’। जुन पलाष्टिकको पूल हो जसले जिन्दगीभर साथ त दिन्छ, तर समय समयमा उसलाई धुनचाहिँ पर्दछ यो फूल सुन्दर पनि हुन्छ, स्थायी पनि हुन्छ तर यसमा त्यो सुगन्ध हुँदैन जो त्यतिबेलाको फूलको डालीमा फुलेको फुलको हुन्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २०, २०७४, ०६:४५:२२